Ny "alahamady" dia teny arabo nogasiana izay milaza zavatra telo loha amin'ny foko merina:
- Dikany voalohany: Tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-16, rehefa tafakatra taty anivon'ny riaka, tao Ambohidrabiby ny mpanjaka arabo iray atao hoe Rabiby (Habib), mpanjaka malaza tamin'ny fanandroana, ary nandresy ireo vazimba teo amin'ny manodidina an'Ambohidrabiby, dia novainy ho teny arabo ny anarambolana 12 izay tamin'ny teny maley sy vazimba teo aloha. Ny "Alahamady" arak'izany dia iray amin'ireo anarambolana vaovao amin'ny teny arabo nataon-dRabiby ireo. Rabiby sy ny fahaizany mitety andro moa dia voatazon'ny fitenenana manao hoe: "Aza milaza mahita volana alohan'i Rabiby".
- Dikany faharoa: entina hilazana vintana (chance) koa ny hoe "Alahamady" ka iray amin'ireo reni-vintana efatra amin'ny malagasy izy. Ny volana 12 mantsy dia samy manana ny vintany avy, izany hoe zanabitana ny volana 8 amin'izany.28 andro eo ho eo moa ny volana iray tamin'ny fanisan'andro malagasy ary ny andro iray dia mitondra anarambolana roa dia ny volana diavina (io no reny vintana) sy anarambolana iray hafa (zanabitana). Ohatra volana diavina, Alahamady (renivintana), fa ilay zanabitana alohontsy: dia Alahamady alohontsy no vitan'ilay olona. Fa misy kosa olona sady teraka tamin'ny volana alahamady no mbola zanabitana (vava) alahamady. Toa an-dRalambo, Andriamasinavalona ary Andrianampoinimerina izany. Ny volana alahamady hono no volana tsara indrindra satria ny olona teraka eo dia natao hitondra fanjakana. Ralambo zafikelin-dRabiby dia teraka ny vava alahamady koa lasany ny fanjakana. Tamin'i Rabiby dia voalohan'ny volana amin'ny volana 12 ny volana alahamady.
Tato aoriana, mba ho fahatsiarovana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany dia nataon'i Ralambo amin'ny volana alahamady ny fandroan'andriana ka "Alahamadibe" no iantsoana io andro iray amin'ny volana alahamady hanaovana ny fandroan'andriana io. Tamin'izany dia lasa fomba fiheverana fa io fitsingeranan'ny fahatsiarovana ny andro nahaterahan-dRalambo io no lasa tonon-taona sy noheverina ho toy ny voalohan'ny taona na "asaramanitra". Tamin'i Ralambo dia nifanindry ny alahamadibe, ny fandroan'andriana ary ny asaramanitra.
Nandritry ny taonjato faha-19, dia nisy mpanjaka nanova ny andro fanaovana ny fandroan'andriana ho amin'ny andro nahaterahany ka tsy nifanindry intsony nanomboka teo ny volana alahamady, ny fandroan'andriana ary ny asaramanitra.
Ankehitriny dia diso tanteraka ny fankalazana miaraka ny alahamadibe sy ny fandroana satria saika nampifanarahina amin'ny fikaontian'andro ny volana jiosy na silamo izy ireny.
- Dikany fahatelo: ny "alahamady" dia ilazana ny "zoro avaratra antsinana" eo amin'ny ntaolo. Zoro saro-pady sy masina indrindra ny alahamady satria eo no itodihana raha mivavaka amin'andriananahary sy ny razana ary eo no apetraka ireo zava-masina rehetra. Ny zoro alahamady no zoro firarazana, ny razana izay niandohana. Koa miainga amin'andriamanitra sy ny razana ny zavatra rehetra. Ary izany no maha loham-bitana sy voalohan'ny volana ny alahamady. Ny mpanjaka RABIBY teo Ambohidrabiby hatrany no nametraka ny alahamady ho eo amin'ny zoro avaratra antsinanana mba ho fahatsiarovany fa avy any Lameka (La Mecque), any avaratra antsinanan'ny Madagasikara ireo razana niandohany ka nomeny lanjany manokana io zoro io raha Ambohidrabiby, vohitra misy azy no jerena: eo amin'ny alahamaditanin'Ambohidrabiby, amin'ilay tanàna atao hoe Fonohasina no nanao joro sy nangata-pitahiana i Rabiby alohan'ny hanafihany ny vazimba teo antampon'Ambohidrabiby koa napetrany amin'io toerana io ny hasin'ny fanjakany ary izany hasina mipetraka ao Fonohasina izany no maha-hasin'Imerina ny vohitr'Ambohidrabiby. Mbola ny vavahady alahamady amin'ny vohitr'Ambohidrabiby,no natokana hidiran'i Rabiby sy ny taranany fa ny andriana hono tsy mba miditra amin'ny vavahady atsimo amin'ny vohitra iray; Tamin'i Ralambo dia mbola nolalainy fatratra ny zoro alahamady, manamarina izany, ao ambany avaratra antsinana amin'ny vohitr'Ambohidrabiby no tsakaina ny rano ampiasain'i Ralambo amin'ny sakafony sy hisasany; ao anatin'ny lapa, amin'ny zoro alahamady no manao ny fandroana i Ralambo ary mbola amin'ny tanàna atao hoe Fonohasina amin'ny zoron'alahamadin'Ambohidrabiby no nampitoeriny ireo zanak'andriana teo Ambohidrabiby atao hoe Andriandoriamanjaka.
Raha mbola tsy nanjaka Andrianampoinimerina dia efa naminany ny amin'ny hanjakany ny mpanjaka Andriambelomasina ka hoy izy hoe: "ilay ilahifotsy avy amin'ny alahamadintany no tompon'ny farany", kanjo tokoa Andrianampoinimerina sady fotsy marirana izy no avy any ikaloy izay alahamadintanin'Ambohimanga.